कमर्सियल बैंकका शाखा कुन प्रदेशमा कति ? – Nepali Digital Newspaper
कमर्सियल बैंकका शाखा कुन प्रदेशमा कति ?
नयाँ संविधानअनुसार स्थापित सात प्रदेश मध्ये प्रदेश नं ५ का सबै स्थानीय तहमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखा खुलेका छन् । केन्द्रीय बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको ‘वित्तीय पहुँच विषयक’ प्रतिवेदनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा खोल्न र उनीहरूलाई सहजीकरण गर्न प्रदेश नं ५ अग्रस्थानमा रहेको उल्लेख गरेको छ । यसप्रकार आम जनताको वित्तीय पहुँचमा प्रदेश नं ५ शीर्ष स्थानमा रहेको पाइएको छ ।
विवरणअनुसार २०७६ असोज महिनासम्म प्रदेश नं ५ का सबै स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकका शाखा खुलेका छन् । कूल १०९ स्थानीय तहमध्ये सबै स्थानीय तहमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखा खुली स्थानीय सेवाग्राहीलाई बैंकिङ सेवा पुऱ्याएका छन् ।
कर्णाली प्रदेशका १७ लाख ५५ हजार ६२ जनसङ्ख्यालाई कूल ३५४ बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखाले सेवा दिएका छन् । प्रतिशाखा जनसङ्ख्याको आधारमा हेर्दा एक बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कूल चार हजार ९५८ जनालाई सेवा दिनुपर्ने अवस्था रहेको छ ।
यस्तै सुदूरपश्चिमका चार हजार ४०९ जनालाई एक बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखाले सेवा दिएको छ । सो प्रदेशका वित्तीय संस्थाका शाखा सङ्ख्या ६४७ रहेका छन् । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले प्रकाशन गरेको प्रदेशगत तथ्याङ्कको हिस्साका आधारमा केन्द्रीय बैंकले प्रतिशाखा बराबरको जनसङ्ख्याको अनुपात निकालेको हो ।